विदेशी भूमीबाट नेपाली भूमीपुत्रको पृथ्वीजयन्तीको चिन्ता ! • Janaboli
मिनबहादुर पण्डित / दुवाई । हरेक देशले आफ्नो देशको लामो र गौरबपूर्ण इतिहासमा सबै भन्दा ठुलो योगदान पूर्याऊने नेता वा राजालाई सम्मान स्वरूप राष्ट्रिय बिभुति मानेर राष्टि«य दिबस मनाउने गर्दछन् । अनि त्यस्तो नेता वा राजाको जन्म दिनमा सार्बजनिक बिदा समेत दिने गर्दछन । र सम्मान स्वरूप आफ्नो देशको मुद्रामा तस्बिर समेत राखेको हामि सबैले देखेकै कुरा हो । तर नेपालमा २४७ बर्षे राज्त्रन्त्रको अन्त्य पश्चात् पृथ्वी नारायण साहको जन्मजयन्ति मनाउने कि नमनाउने ? भन्ने बिषयमा बिभिन्न बिवादहरु भएका छन् । कुनै सरकारले पृथ्वीजयन्तिमा सार्बजनिक बिदा दियो भने कुनै सरकारले दिएनन् । तर अधिकांश नेपाली जनता अहिले पनि पृथ्वी नारायण साहको जन्म जयन्ति मनाउन चाहन्छन । नेपाली जनता पृथ्वी नारायण साहलाई आदर र स्रद्दा गर्ने गर्दछन । त्यसैले पृथ्वी नारायण साहको अबमुल्यन गर्नु कुनै पनि दृस्टीकोण बाट सहि मान्न सकिन्न । विगतमा राजतंत्र छदा राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा पृथ्वी जयन्ती नियमित रूपले मनाउने गरन्थ्यो । राजतन्त्र रहने वा नरहने कुरा आफ्नो ठाऊँमा छ, तर इतिहास र पूर्खाको योगदान बिर्सनू ठीक होईन । राजतंत्र जोगाउने र बलियो बनाउने काम राज परिवारका उत्तराधिकारीहरूले नै हो,अरुले राजतन्त्र बालियो बनाइ दीने होईन ।
आफु टन्न भ्रष्ट्राचार गरेर अर्बपति हुने, देश बनाउने भिजन ल्याउन नसक्ने, इमान्दार भएर काम नगर्ने अनि देश नबन्नुमा पृथ्वी नारायण साहले बनाएको एकात्मक शासन प्रणालीलाइ दोस दिने दुखि आत्माहरु पनि भेटिदो रहेछ, हैट । त्यो बेला त्यहि ठुलो थियो, त्यहि सहि थियो । त्यसैले पृथ्वीनारायण साहले त्यो बेला जे गरे ठिकै गरे । अहिले जे सहि छ त्यहि गर, देश अबश्य बन्छ । अहिले देशको हालत बिग्रिनुमा पृथ्वी नारायण साहलाइ दोष दिन मिल्छ ? यातायात र संचार साधन नभएको त्यो जमानामा १० दिन भोकै हिडेर पुर्ब पश्चिम पुगेर लडाई लडेर नेपाल एकीकरण गर्नु त्यति सजिलो कुरा थिएन । त्यसैले यसलाई हल्का रुपले लिनु हुदैन । त्यो बेला राजालाई लडाई बारे सोध्न एक हप्ता लगाएर हिडेर काठमाडौ आउन पर्थ्यो, फर्किदा अरु एक हप्ता लाग्थ्यो । अर्को कुरा पृथ्वी नारायण साहले अहिले जस्तो बिश्व बिद्यालयमा पढ्न पाएका थिएनन् । त्यो बेला गुरुकुल शिक्षाको चलन थियो । त्यसैले उनीमा स्कुले ज्ञानको कमि हुनु स्वाभाविक नै हो । र पनि उनको दिव्य उपदेश पढ्दा उनीमा प्रसस्त ज्ञान थियो भन्ने बुझिन्छ । अनि देश र जनताको हित सोच्ने राजा थिए भन्ने नै, बुझिन्छ । उदाहरणका लागि दक्षिणको छिमेकी धुर्त छ, होसियार रहनु, नेपाल दुर्इ ढुंगाबीचको तरुल हो, घुस लिन्या र दिन्या दुवै राष्ट«का सत्रु हुन् यिनको सर्बश्व हरण गर्या पनि पाप लाग्ने छैन, प्रजा बलियो भए मात्र राजा बलिया हुन्छन् आदि भनाइ (दिव्यउपदेश) अहिले पनि उत्तिकै मिल्दैन र ? पृथ्वीनारायण साह ‘’नेपाल चार जात छत्तीस बर्णको साझा फुलबारी हो’’ भन्थे तर अहिलेका नेता र राजनीतिक पार्टीहरु जातीय राजनीति गरेर आफ्नै मुलुक भित्र द्रंद निम्त्याउदै छन् अनि सदियौ देखि मिलेर बसेका जात जाति बीच फुट पैदा गरेर आफु फाइदा लिदैछन् । जात र धर्मको राजनीति गरेर मुलुक कहिलै बन्दैन, बरु समस्याहरु समाधानको सट्टा झन् झन् बल्झिन्छन । अरुक़ो अबमूल्यान गर्नुको सट्टा आफूले के गरे र के गर्नु पर्थ्यो भनेर सोची दिए कती राम्रो हुने थियो ।
यदी ५१ बर्षमैपेथ्वी नारायण साहको स्वर्गारोहण नभएको भए अझ धेरै काम गर्न पाउने थिए, तर धेरै बाच्न पाएनन्, साएद त्यो बेला अहिले जस्तो आधुनिक उपचार पद्दति नभएर होला । पहिले जस्तै अहिले पनि अस्पताल नहुने हो भने नेपालका धेरै नेताहरु मरी सक्ने थिए । नेपालका नेताले मदन भण्डारी बाहेक ५१ बर्षको उमेर सम्म कसैले देशको लागि खासै र चाहिएको योगदान गर्न सकेका छैनन् । त्यसैले पृथ्वी नारायणको आलोचना गर्ने मान्छे इतिहास बुझेको सच्चा नेपाली नै होइनन । यदी पृथ्वी नारायण न भैदिएका भए ‘’नेपाल’’ भारतले वा इस्ट इन्डिया कम्पनीले खाइ दिने थियो । आज हामिले उनले गर्दा नै नेपाली भन्न पाएका छौ । उनले घडेरी जोडी दिए, अब आधुनिक घर बनाउने काम त हाम्रो हो नि । क्रिसमस मनाउने तर पृथिबी जयन्ति नमनाउने ? पृथ्वी नारायण साह घुस लिन्या र दिन्या राष्ट्रका सत्रु हुन्, यिनका सर्वस्व हरण गर्या पनि पाप लाग्ने छैन भन्थे, तर अहिलेका नेता त् आफै भ्रष्ट्राचारी छन् । घुस, चन्दा, कमिसन नलिए पार्टी नै चलाउन सकिदैन भन्ने सोच्छन । डनहरु हाम्रा कार्यकर्ता हुन्, तिनलाई छुनु हुदैन भन्ने सोच्छन, अनि देश बन्छ त् ? त्यसैले राष्ट«पिता पृथ्वी नारायण साहको जन्मजयन्ति मनाउनै पर्छ, अनि उनको सम्मान स्वरूप नेपाली नोटमा पृथ्वी नारायण साहको फोटो राख्न्नु पर्दछ । भारतको नोटमा गान्धिको फोटो छ, अमेरिकाकोमा लिंकनको, चीनमा माओको, पाकिस्थानमा जिन्नादको भने नेपालको नोटमा पृथ्वी नारायणको फोटो राख्न्न किन नहुने ? त्यसकारण नेपालीको अस्तित्व समाप्त पार्ने सक्तिहरुले मात्र पृथिब नारायण साहलाइ गालि गर्ने गर्दछन । बाँकिको मनमा पृथ्वी नारायण साह प्रति राजा बिरेन्द्रलाइ जत्तिकै स्रद्दा छ । त्यसैले इतिहासलाइ गलत ब्याख्या गर्नेहरुको भ्रममा नपरौ । आफ्नो इतिहास, पुर्खाको गौरब र योगदानलाइ नबिर्सौ । बाउ त् बाउ नै हुन्छ, बाउले टन्न कमाइ दिएनन त्यसैले मैले मोज मस्ती गर्न पाइन् भनेर भन्न मिल्छ र ? सम्पति जोड्न नसक्नु बाउको पनि मजबुरी थियो होला, नत्र त् कसले पो आफ्नो सन्तानलाई सम्पति नजोडीदिउ भन्ने सोच्लान र ? कमाउन नसक्ने बाउलाई गालि गर्न मिल्छ र ? पृथ्वी नारायण साहको नेपाल एकिकरणको अभियानले त् पुर्बमा टिस्टा र पक्षिममा काँगडा सम्मको भूमि जोडेका थिए, तर त्यस पछिका पुस्ताले उक्त भूमि बचाउन सकेनन । हामि चाहि बचेको भूमि भारतले मिच्च्दा पनि चुपचाप छौ, हामि आफ्नो बचेको भूमि बचाउन र बनाउन सकी रहेका छैनौ । हामि त् एक आपसमा बिवाद र झगडा गरेर अल्झेर बसेका छौ । हामि भन्दा पछि बिकास गर्न थालेका गरिब देशहरु कँहा बाट कँहा पुगी सके । तर हामि तिनै देशमा रोजगारीका लागि युवाहरु पठाउछौ । अनि तिनै देश बाट आर्थिक सहयोग लिने गर्दछौ । यहि हो त् हामिले बनाएको देश बिकासको आधार ? यहि हो त नेपालको पहिचान ? त्यसकारण पृथ्वीजयन्ति मनाउदैमा कसको के बिग्रिन्छ ? क्रिस्मस र बिदेशी ग्रलफ्रेन्डको बर्थ डे मनाउने तर पृथ्वीजयन्ति चाँही नमनाउने ? त्यसैले कुनै पनि पक्षलाइ पृथ्वीजयन्तिको बिबाद नगरिदिनु हुन् अनुरोध छ । सरकारलाई पनि पृथ्वी जयन्तिको दिन हरेक बर्ष सम्मान स्वरुप सार्बजनिक बिदा घोषणा गरिदिन बिनम्र अनुरोध छ ।